Web Development with PHP - Intermediate Course
Laravel Framework, PHP with OOP and LEMP Server Configuration and Deployment with VPS ကိုလေ့လာမည့်သူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားသော Course တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Basic PHP ကို သိရှိပြီး / လေ့လာပြီးလို့ Laravel Framework ကို စတင်လေ့လာမည့်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ
(Weekend class OR Weekday Class )
Laravel Framework, PHP with OOP and LEMP Server Configuration and Deployment with VPS ကိုလေ့လာမည့်သူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားသော Course တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Basic PHP ကို သိရှိပြီး / လေ့လာပြီးလို့ Laravel Framework ကို စတင်လေ့လာမည့်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
- Laravel Framework (5.7)
- Mini Project with Laravel Framework
- MySql with UI and from command line Interface
- Basic Git Repository Usage ( with team members and own branch )
- Basic Linux Usage with Ubuntu
- Laravel Project Deployment with Nginx Server at Linux Live Ubuntu Server ( VPS and LEMP )
Special Chance အနေနဲဲ့ Laravel Project တစ်ခုကို မိမိကိုယ်တိုင် Real Live Server ( Linux VPS ) တစ်ခုပေါ်မှာ တင်ခွင့် ရမည့် အခွင့် အရေးဖြစ်ပါတယ်။
Linux Ubutnu Server ပေါ်တွင် PHP, MySql, Nginx Web Server, Composer, Laravel Project Deployment များကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင် အတွင်း professional developer များ လုပ်ကိုင်နေသကဲ့သို့
မိမိရေးသားထားသော Project / Source Code များကို Git Repository ပေါ် ကိုယ်တိုင်တင်ရပါမယ်။
PHP Laravel Project ကို Live Run ရန် Linux VPS ( Virtual Private Server ) Configuration and Deployment ပြုလုပ်သည့် သင်ခန်းစာ တစ်ခုလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LEMP Stack အနနေဲံ Server Setup လုပရြမှာဖှစပြါတယြ။ LEMP Stack ( Server Setup ) သငကြှားနစေဥအြတှငြး Linux Ubuntu ( VPS ) Server တစလြုံးခငြွးစီဖှငြံ
သင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ Setup လုပ်လိုက်သည့် Liver Server ကို Online / live အနေနဲဲ့ တွေ့ မြင်ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
* Remark about VPS
- VPS Server က သင်ကြားနေစဥ်ကာလ အတွင်းဘဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Live Server ကို Run ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်း Server IP address ဖြင့် အသုံး ပြုမှာဖြစ်ပြီး Domain Name Support ေတာ့ မပါ ပါဘူး။
အတန်းအချိန် နှင့် သင်တန်းကြေး
Total -2months
သင်တန်းကြေး - ( 250,000 )
- Basic PHP ( core PHP ) သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ( MUST )
- PHP Arrays and Looping များအကြောင်းကို သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ ( MUST )
- Basic PHP ဖြင့် CRUD တစ်ပုဒ် အနည်းဆုံး ရေးသားနိုင်ရပါမယ်။ ( SHOULD )
- ကိုယ်ပိုင် Laptop ယူဆောင်လာခဲ့ဖို့လိုပါမယ်။ ( Must )
General knowledge about laravel, OOP and Git Repository
ယနေ့ခေတ် Modern PHP Framework (eg. Laravel, Symfony or Others) တွေတော်တော်များဟာ OOP ကိုအသုံးပြုပြီး တီထွင်ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ MVC Design Pattern များကို လေ့လာတော့မည်ဆိုလျှင်တော့ OOP ပတ်သတ်ပြီးလည်း သေချာစွာသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
OOP, Class, Object, Property, Method, Constructor, Destructor
Scope - Public, Private, Protected, Local, Global
Inheritance, Trait, Interface, Abstraction, Encapsulation, Polymorphism
Static, Final, etc. ......
Modern PHP Framework တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Laravel Framework လေ့လာတော့မယ်ဆိုလျှင်လည်း Basic PHP and OOP ကို သေချာစွာကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ classes, objects, properties, methods, dependencies, traits, and etc. အစရှိသဖြင့် ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်ထားသင့်ပါတယ်။ Basic Requirement အနေနဲ့
- Composer ( PHP Package Manager )
- Terminal / Command line Usage
အစရှိသဖြင့် ခေါင်းစဉ်များလည်း သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိရေးသားထားသော Source Code များအတွက် Source Code Version Control တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Git Technology အကြောင်းလည်း သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်တွင် Team, Organization, Company တော်တော်များများတွင် Git Repository ကို အသုံးပြုံနေကြပါတယ်။
Course Style and Benefit
* လုပ်ငန်းခွင်ဝင် အတွေ့အကြုံရှိပီး သင်ကြားမှုလည်း အတွေ့အကြံုရှိသည့် ဆရာကနေသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
* သင်ကြားနေစဉ် အတွင်း မိမိကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ သင်ခန်းစားများလည်း ပြုလုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
* MySql Database and SQL Query လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
* Database ကို User Interface ဖြင့် လေ့လာခြင်း ၊ Command Line မှ MySql Database ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း ၂ မျိူးလုံးကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
* Mini Project တစ်ခုကို Laravel framework ဖြင့် ရေးသားရပါမယ်။
* Programming Logic များ ၊ Usages များ ၊ မည်သို့ အသုံးပြုနိုင်သည် အသုံးပြုသင့်သည် Logic များ flow များအကြောင်းလည်း Share ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
* သင်တန်းပြီးဆုံးသွားလျှင် Laravel ဖြင့် Static and Dynamic Website များရေးသားဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
09 4200 88636
Block 56, Ground Floor, Room 01, Zalun Street, Sanchaung Township, Yangon
Sat & Sun (10:00 am - 3:00 pm) အတွင်း လာရောက် အပ်နှံနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းသာဦးရေ အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ အတန်းတစ်တန်းတွင် 10 ဦးသာ လက်ခံပါမယ်။ ကိုယ်ပိုင် Laptop ယူဆောင်လာခဲ့ဖို့လိုပါမယ်။
Facebook Reference Link ::